” ဘယ်နေ့လဲ ဘယ်အချိန်လဲ ဘယ်တော့များမှလဲ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ” ဘယ်နေ့လဲ ဘယ်အချိန်လဲ ဘယ်တော့များမှလဲ”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Dec 7, 2010 in Drama, Essays.. | 13 comments
သူအဖေအမေတွေကလဲ ” ငါ့သားရယ် အဖေတို့ အမေတို့လဲ အသက်ကြီးပါပြီ အိမ်ကထောင်ထားတဲ့ ရွှေဆိုင်းအလုပ်ကို ဦးစီးပါတော့ ”
ကိုပေါက် ဆောင်းပါး တော်တော်ကောင်းပါတယ် … ကိုဘီစိုးလိုလူတွေက အများကြီးပါပဲ … တတ်သလားဆိုတော့လဲ မတတ်ဘူး .. မတတ်ဘူးလားဆိုတော့လဲ နဲနဲတော့တတ်တယ် …
ကိုဘီစိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ကျောင်းမပြီးခင်ထဲက ကျောင်းစရိတ်အတွက် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနေရတဲ့လူတွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးမောရသလားမှတ်တယ်။ ကိုဘီစိုးလိုလူတွေကလည်း မောစရာပါဘဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်လူငယ်တွေသင်တန်းစုံတခုပြီးတခုတက်နေကြတာအတော်ကြာပါပြီ။ မှတ်မှတ်၇၇ (၁၉၉၀)၀န်းကျင်ဈေးကွက်စီးပွားေ၇းစဖွင့်ကတည်းကဆိုပါတော့။ ခုချိန်မှာတော့တူတူမနဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ၇ဲ့သားသမီးများလဲ တက်လိုက်ကြတဲ့သင်တန်းတွေဆိုတာသြချလောက်၇ပါတယ်။ မိဘတွေကတတ်နိုင်ကြသူ၇ှိသလိုမတတ်နိုင်ကြသူတွေလဲဒုနဲ့ဒေးပါ။ အဌာ၇ဿ(၁၈)၇ပ်ဆိုတာခုခေတ်ကလေးတွေအတွက်၇ီစ၇ာကြီးတောင်ဖြစ်နေမလားဘဲ။
သင်တန်းတွေကလဲမှိုလိုပေါက်နေပါပြီ။ တတ်နိုင်ကြသူတွေကပေးကြတော့၊ အတတ်ပညာနဲနဲပါးပါး (အချို့လဲအဲ့ဒီပညာလောကမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာခဲ့ကြတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အောင်လက်မှတ်များလဲ၇ှိကြမှာပါ) တတ်သူတွေကလဲ၊ ဘာမှမမေးနဲ့မကြားဘူးတဲ့ကိုးကားချက်တွေပြုပြီးကြော်ငြာလို့ဝင်ငွေများအထူးဖြောင်းဖြူးလျက်၇ှိကြပါတယ်။ သင်တန်းစ၇ိတ်ကလဲနဲမှမနဲဘဲ။ လက်လှမ်းမှီ၇ာတွေကလဲနိုင်ငံခြားမှာ၇ှိတဲ့ဆွေမျိုး၇င်းခြာများဆီကငွေကြေးအထောက်အပံ့တွေယူကြလို့ပေးကမ်းကြသူတွေကလဲဘုမသိဘမသိပေးကြပါတယ်။ ဘယ်လိုမှတားမ၇၇ှင်းပြောပြလို့လဲနားမလည်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ သူတို့တက်လာတဲ့သင်တန်းတွေကအထောက်အကူဖြစ်လားဆိုတော့လဲကောင်းတဲ့အထောက်အထားလဲမတွေ့၇ပါဘူး။ ခက်တာကသူတို့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ၇ှိ၇ှိသမျှအိမ်နီးချင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေကအစသင်တန်းစုံတွေတက်လို့နေတာမမြင်ချင်အဆုံးဆိုတော့၊ ကိုယ့်စကားကအ၇ာမေ၇ာက်လှပါဘူး။ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့၊ ဗီဇာကဘယ်မှာနေမှန်းမသိပါဘူး၊ သင်တန်းကတော့ဟောတခုဟောတခုဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ပါ။ သင်တန်းများများတက်နိုင်လေဂုဏ်၇ှိလေလို့မှတ်ယူနေကြပြီလားတော့မသိပါဘူး။
ဘုန်းကြီး၇ူး နဲ့ လှေလူးတွေဖြစ်နေပါပေါ့လား…။
ဦးပေါက်ဆောင်းပါးဖတ်ရတာ ဒီတခါစိတ်ဝင်စားဖို့ အကောင်းဆုံးပဲ။ တူမအပျိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့။ သူတို့ကကြောင်ချစ်တတ်လားဟင်။ ဦးပေါက်စာထဲမှာ ဆွေမျိုးတွေအကြောင်းတော့ပြောတယ်၊ ကိုယ့်သမီး အကြောင်းများလည်းရှိရင် လုပ်ပါအုံး။
ဦးကြောင်ကြီး ကြည့်ရတာလစ်ရင်လစ်သလို ကြော်ငြာဝင်တယ်နော် (အလျှင်လိုနေပီထင်တယ်) ;)
ဦးကြောင်ကြီးသာလူပြိုသေချာ/ စစ်စစ်/ ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင် ကြောင်း NRC Card, Passport, Recommend Letter, Certificate, Medical Check up form…..တွေသာအစုံအလင်ပေး ကျနော်ကြောင်ခြစ်တတ်တဲ့ မမ တစ်ယောက်ရှာပေးမယ်
ဆောင်းပါးလေး ဒီရက်ပိုင်းပို့ လိုက်ပါဦးနော…။ ဒီလ သတင်းစာလုပ်ရတော့မဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီ…။
ဒီနေ့ပဲ….. ကားမောင်းနေရင်း ..နောက်က ၀င်ဆော်သွားလို့ … အရှိန်နဲ့ရှေ့ ကားပါဝင်တိုက်မိသွားပြီး … အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ ..ဒီရက်ပိုင်း ..နည်းနည်း ဘီးဇီးမှာမို့ ပါ..။
ကိုပေါက်ရေ ပညာလို” အို ” သည်မရှိပါတဲ့ ခင်ဗျာ အဲဒိတော့ အိုမင်း ရင့် ရော်တဲ့အထိ ပညာတွေသင်လို့ မကုန်ပါဘူး နော်
ပျင်းလို့ ဒါမှမဟုတ် ပညာသင်ရတာပျော်နေလို့ ကျွန်တော်ဆို ကျောင်းတွေပိတ်ထားလို့ အလုပ်ထဲရောက်ကာစက ငါဆယ်တန်း မအောင်သေးရင်ကောင်းမှာ လို့တောင်တွေးမိသေးတယ် အဲဒိတုန်းက ကျောင်းသားစိတ်မပျောက်သေးတာလေ 19နှစ်ပဲရှိသေးတာကိုး
အခုရက်က မလွမ်းစကောင်းမပြတ်လို့ ရေးချင်တာလေးတွေကို အောင့်ထားရတာ အခုမှချရေးနေလို့ပါ ။
ဒီဆောင်းပါးလေးက အတော်ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် အချက်က ၂ချက်ရှိတယ် ကျွန်မတို့မြန်မာအများစုရဲ့ ပြဿနာလို့တောင်ခေါ်ရမယ်ထင်တယ် မြန်မာတွေဟာ ဘာလုပ်လုပ်မဖြစ်လားဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံခြားမှာလည်းဘယ်နားချလိုက်ချလိုက် ငတ်သေတာတော့မရှိကြပါဘူး ဒါပေမယ့် သူများနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် “jack in all, master in none” ဖြစ်နေတာတခုပဲ ဘာလုပ်လုပ်တမျိုးတည်းမလုပ်တော့ သူများနဲ့ယှဉ်ရင် နောက်ရောက်သွားရော ပိုဆိုးတာက အာရှမှာဆို အလုပ်အမျိုးမျိုးကို ရထားတဲ့ဘွဲ့နဲ့ကိုက်ကိုက်မကိုက်ကိုက် ပြောင်းလို့ရတယ် ဥရောပနိုင်ငံတွေကျတော့မရတော့ဘူး ဒီမှာတင် လူတွေဟာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်တွေဖြစ်ကုန်တော့တယ် ဒါကြောင့် သင်တန်းတော့တက်ပါ တခုနဲ့တခုဆက်စပ်ပြီး ရေရှည်တလိုင်းတည်းသွားနိုင်အောင် လုပ်ကြပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ် ပညာခေတ်ကြီးမှာ ပညာမပါဘဲလည်း ရေရှည်မရပ်တည်နိုင်ဘူးလေ ဒါကြောင့်တလိုင်းတည် specialized လုပ်သွားကြပါလို့ အကြံပေးပါရစေ
ခေတ် ၂ ခုကိုယှဉ်ကြည့်ရင် ကလေးတွေ
အချိန်အကုန်ခံ ပိုက်ဆံအကုန်ခံ ပြီးသင်တန်း
အခုကလေးတွေက ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာဝါသနာပါမှန်းမသိကြတာ အဆိုးဆုံးပဲ … တစ်ခုခုကိုဇောက်ချပြီးလေ့လာရင် တဖြည်းဖြည်းကျွမ်းကျင်လာပြီး လုပ်ငန်းမှာ အောင်မြင်လာမှာ … အခုခောတ်က ၀ါသနာထက် ဘယ်သင်တန်းက အလုပ်ရလွယ်မလဲဆိုပြီး အလွယ်လိုက်ကြတော့ ရေရှည်အဆင်မပြေကြဘူး …
” ဘယ်နေ့လဲ ဘယ်အချိန်လဲ ဘယ်တော့များမှလဲ” ?????
သူတို.က မိတ်ဆက်ပေးတိုင်းလဲ မကြိုက်ဘူး ~~~
အာဖျံကွီးဦးလေးအသိ ပညာတတ်လူပျိုသိုးကြီးတွေ ပြောနေတာကြားဖူးတရ်
အသက်ဆိုရင် ၂၅ အောက်မှ၊ ဆရာဝန်မမှ ဘာမှ ညာမှနဲ. ~~~
“စိတ်ထဲကတော့ အဲဒီအရွယ်၊ အဲဒီလိုတော်၊ အဲဒီလိုကောင်းတဲ့သူတွေက ခင်ဗျားတို.ကိုမယူဘူးလို.” ဟီးးး